Teta! Nke 6 2016 | Ihe Anyị Ga-eme Ka Anyị Ghara Ịna-ebutekarị Ọrịa
Ọrịa ndị na-apụta ọhụrụ na ndị nke laranụ mechaa bịaghachi nwere ike ịkpatara gị ezigbo nsogbu. Olee ihe i nwere ike ime iji ghara ibute ha?
Kwa ụbọchị, ahụ́ anyị na-alụso ọtụtụ ndị iro ọgụ. Ndị iro a anaghị eme mkpọtụ, a naghịkwanụ ahụ ha anya, ma ha nwere ike ịkpatara anyị ọnwụ.
Gụọ ihe a ka ị mata ihe ise nwere ike ime ka i bute ọrịa nakwa ihe ị ga-eme iji chebe onwe gị.
Akịrịkọ na-eji eriri ndị na-esi ya n’ahụ́ apụta anyapagide onwe ya n’ihe. Ịmata otú eriri ahụ si anyapagide n’ihe ga-enyere ndị mmadụ aka ịmata otú a ga-esi nyapagide ihe n’ụlọ, ma ọ bụ rụpụta ihe e ji anyapagide akwara n’ọkpụkpụ.
A kpọrọ ya “Ọkà mmụta nke oge gboo e nwere ike iji tụnyere ndị a ma ama n’ụwa n’oge a.” Gịnị mere o ji bụrụ ọkà mmụta a ma ama n’ụwa?
Otú obere azụ̀ a nwere àgwà mara mma n’ahụ́ ya na anemone si emekọrịta dị ezigbo ịtụnanya. Olee otú ha si na-emekọrịta, gịnị mere mmekọrịta ha ji pụọ iche?
Ịbịa ihe n’oge ma ọ bụ abịaghị ihe n’oge nwere ike imetụta otú e si ele mmadụ anya. Gịnị ka Baịbụl kwuru maka ịbịa ihe n’oge? Olee otú ị ga-esi mụta ịna-abịa ihe n’oge?
Ebe e depụtara isiokwu ndị gbara na Teta! Ndị e bipụtara n’afọ 2016.
Jehova dị ọcha. Mụtakwa otú gịnwa ga-esi na-adị ọcha.